Ny haintany tany Guadeloupe sy tany Martinique · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Septambra 2018 8:18 GMT
Araka ny hita tamin'ny lahatsoratra tato amin'ny Global Voices, niaina haintany nahery vaika ireo vahoaka Karaibeana tao anatin'ny herinandro vitsivitsy.
Manomboka ny volana Janoary ka hatramin'ny fiandohan'ny volana Jona ny andron'ny Karemy (vanim-potoana fifadian-kanina sy ny famehezan-tena ho an'ireo Katolika) any Karaiba. Mifandraika amin'ny vanim-potoana tsy fisian'ny orana sy ny hafanana ambony dia ambony izany vanim-potoana izany izay ahitana ny fahamainan'ny tany tanteraka.
Tany Martinika, nanambara ny faratampon'ny Karemy niaraka tamin'ny tononkalo i Bondamanjak:
Nanome ohatra hafa momba ny voka-dratsin'ity haintany ity teo amin'ny tontolo iainana i Bondamanjak tamin'ny alàlan'ny fitantarana ny hatairana tsapan'ireo Martinikey ny faran'ny herinandro rehefa nahita ny afo teo akaikin'ny volkano tao amin'ny Nosiny, ny Tendrombohitra Pelée .
Niteraka ahiahy teo amin'ny mponina Martinikey ity toe-draharaha ity, izay nitarika ny Sampan-draharaha misahana ny Fanaraha-maso ny Volkano sy ny Horohorontany ao Martinique (OVSM), hamoaka filazana manokana ny Talata, mba hampitoniana ny ahiahin'ny mponina. Navoakan'i Montray Kreyol eto indray.
Tamin'ny volana Oktobra (2010), nokarakaraina tany Guadeloupe ny “Andron'ny rano” fanao isan-taona, natao hanentanana ny maha-zava-dehibe ny fandrindrana sy ny fitantanana ny rano eo amin'ny Nosy. Ankehitriny, niresaka momba ity lohahevitra ity indray ilay bilaogera ao Martinika, Montray Kreyol, izay nampitondrainy ny lohateny hoe “Ny tsy fahampian-drano“. Nofintinin'ity bilaogera ity fa raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ara-politika matanjaka dia tsy misy ny fitantanana mahomby ny rano .
Ary momba ny resaka politika ao Guadeloupe, ilay bilaogera mpandala ny tontolo iainana sady olo-malaza ara-politika antsoina hoe Harry Durimel, izay nanao fanentanana ho amin'ny fifidianam-paritra (ny 14 sy 21 Martsa) dia namoaka ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “ny volamena manga sy ny fomba hanangonan-drano” nitanisany ny fepetra rehetra hitsitsian-drano ao an-tokantrano sy any ivelany, amin'izao vanim-potoanan'ny tsy fahampian-drano izao.
Niatrika ity toe-java-tsarotra ity teo amin'ny andavanandrom-piainany ry zareo Goadelopeana, araka ny nofaritan'ilay bilaogera Géraldine en Guadeloupe ato, izay faly tamin'ny nilatsahan'ny orana voalohany tao anatin'ny iray volana: